I-Apixaban kunye neRivaroxaban powder
Kwiminyaka yakutshanje, ukuthengiswa kwe-apixaban kuye kwanda ngokukhawuleza, kwaye imarike yehlabathi sele idlulile i-Rivaroxaban powder. Ngenxa yokuba u-Eliquis (apixaban) unenzuzo ngaphezu kwe-warfarin ekuthinteleni ukubetha kunye nokuphuma kwegazi, kunye ne-Xarelto (i-Rivaroxaban powder) ibonisa kuphela ukungathobeli. Ukongeza, i-Apixaban ayi ...
Umboniso we-Guangzhou API ngo-2021
I-86th China International Pharmaceutical Raw Materials / Intermediates / Packaging / Equipment Fair (API yaseTshayina ngamafutshane) Umququzeleli: Reed Sinopharm Exhibition Co, Ltd. Ixesha leMiboniso: ngoMeyi 26-28, ngo-2021 Indawo: China Rhweba ngaphakathi nangaphandle Exhibition Fair Isikali Exhibition: 60,000 square metres Ex ...
Nge-29 kaJuni, Intercept Pharmaceuticals yabhengeza ukuba ifumene isicelo esitsha esipheleleyo seziyobisi esivela kwi-US FDA ngokubhekisele kwi-FXR agonist obeticholic acid (OCA) ye-fibrosis ebangelwe yincwadi yokuphendula engeyiyo i-steatohepatitis (NASH) (CRL). I-FDA ichaze kwiCRL esekwe kwidatha ...
Nge-22 ka-Okthobha, ixesha laseMpuma, i-US FDA yamkela ngokusesikweni i-Veklury (remdesivir) yaseGiliyadi ukuba isetyenziswe kubantu abadala abaneminyaka eli-12 nangaphezulu kwaye inobunzima obungama-40 kg abadinga ukulaliswa esibhedlele kunye nonyango lwe-COVID-19. Ngokwe-FDA, iVeklury okwangoku kuphela kwe-FDA-evunyiweyo ye-COVID-19 t ...
Isaziso sokuvunywa kweRosuvastatin Calcium
Kutshanje, uNantong Chanyoo wenze elinye ibakala kwimbali! Ngeenzame ezingaphezulu konyaka omnye, i-KDMF yokuqala yeChanyoo iye yamkelwa yi-MFDS. Njengoyena mvelisi mkhulu weRosuvastatin Calcium e China, sinqwenela ukuvula isahluko esitsha kwimakethi yaseKorea. Kwaye iimveliso ezininzi ziya kuba b ...
Isatifikethi sokuBhalisa (iRosuvastatin)
Umahluko phakathi kweTicagrelor kunye neClopidogrel
IClopidogrel kunye neTicagrelor zii-P2Y12 receptor antagonists ezithintela ipleyibodi ye-adenosine diphosphate (ADP) ngokukhetha ukuthintela ukubopha kwe-adenosine diphosphate (ADP) kwibhodi yayo ye-P2Y12 receptor kunye nomsebenzi wesibini we-ADP-Mediated glycoprotein GPII.b / III.a. Hayi ...
Umahluko phakathi kwamacwecwe e-atorvastatin calcium kunye neepilisi zerosuvastatin calcium
Amacwecwe e-Atorvastatin calcium kunye namacwecwe e-rosuvastatin calcium zombini iziyobisi ezinciphisa i-lipid, kwaye zombini zezamachiza anamandla. Umahluko othile ulandelayo: 1. Ngokombono we-pharmacodynamics, ukuba idosi iyafana, isiphumo sokunciphisa i-lipid ye-rosu ...
Yintoni omele uyazi ngeRosuvastatin
I-Rosuvastatin (igama le-brand Crestor, elithengiswa yi-AstraZeneca) lelinye lawona mayeza aqhelekileyo asetyenziswayo. Njengamanye ama-statins, i-rosuvastatin imiselwe ukuphucula amanqanaba eepidid yegazi kunye nokunciphisa umngcipheko wenhliziyo. Ngexesha leminyaka elishumi yokuqala okanye ukuze i-rosuvastatin ibisemarikeni, ndi ...
Siyavuyisana nesikhumbuzo sama-70 seChangzhou Pharmaceutical Factory !!!
Kude kube ngu-Okthobha 16, 2019, i-Changzhou Pharmaceutical Factory inembali yeminyaka engama-70, kwaye igubungele i-110000m2 kwaye iqeshe abasebenzi abangama-900, kubandakanya amagcisa angama-300 aneemfuno ezahlukeneyo. Ingcali ukuvelisa amayeza sentliziyo ...
I-Fette ehambelana njani ne-China ixhasa idabi ngokuchasene ne-COVID-19
Ubhubhane wehlabathi we-COVID-19 utshintshe ukugxila kuthintelo lobhubhane kunye nolawulo losulelo kuzo zonke iindawo zehlabathi. I-WHO yenza konke okusemandleni ukuzama ukubiza zonke izizwe ukuba zomeleze umanyano kunye nentsebenziswano yokulwa ubhubhane osasazekileyo. Ihlabathi lezenzululwazi belikhangela ...
I-CPhI kunye ne-P-MEC China 2019 ibhiyozele kwaye yafumana impumelelo enkulu e-Changzhou Pharmaceutical Factory!
ULAWULO Lwe-R & D ngokugqibeleleyo kwiqonga le-R & D eQinisekisiweyo yeZiko loPhando lwaMachiza, elingumnini wesikhululo sokufikelela kwisidanga sobugqirha, sidibanisa izixhobo ngokupheleleyo, ukukhawulezisa inkqubela phambili yophuhliso ...